Nezvedu - Fujian Goridhe Bamboo Viwanda Co., Ltd.
Fujian Goridhe Bamboo Viwanda Co, Ltd.
rakaumbwa muna 2011 uye ndokwenguva nzvimbo 133,400 mativi metres. Iyo fekitori iri muNanjing dhorobha, Zhangzhou guta, Fujian dunhu uko ndiko kunonyanya nzvimbo yemishenjere kukura. Iyo itsva indasitiri yemazuva ano yemishenjere uye yekushanda kambani ine chinangwa che "kusimudzira chirongwa chepasi rose chekuchengetedza nharaunda uye kudzikisa kudyiwa kwechero zviwanikwa".
Chikwata chedu chine nyanzvi gumi dzakazvipira mukubatanidza kutsvagisa kwemishenjere, 11 vagadziri vepamusoro, 26 technicists. REBO ndiro zita rechiratidzo, rakasarudzika mukuparadzira tsika yemishenjere uye hutsva hwekugadzira dhizaini Sezvo wekunze yemishenjere yekumira mutengesi, musika wekunze kwenyika unofukidza iyo US, EU, Mideast, Australia, Asia, South America, nezvimwe.
11 vepamusoro vagadziri
REBO (Fujian Goridhe Bamboo Viwanda Co, Ltd) inosarudzika muR & D, kugadzirwa, uye kushambadzira kwetambo yakarukwa yemishenjere, pasi, kuputira madziro, bhiza rakagadzika puranga, danda, joist, fenzi, zvichingodaro.
Zvigadzirwa zvawana zvishoma 100 yenyika yekuumba patents uye anoshanda patents, uye vane Durability Kirasi 1, Shandisa Kirasi 4, Moto maitiro Bfl-s1, Formaldehyde Emission E1 standard, kutenderera kwekubvumidzwa mvumo uye anoshandiswa zvakanyanya mubindu, paki, hotera, chikoro, imba uye hofisi, kuvaka chirongwa, nezvimwe.
REBO yakazvipira kune yemishenjere puranga yekugadzirisa uye kukwidziridza, inovavarira pane girini, eco-inoshamwaridzika uye hune hutano huzivi. Nekuda kweiyo yepamusoro durabiIity, kuchengetedzeka uye zvimwe zvinhu zvemuviri, tambo yakarukwa yemishenjere inoyevedza uye yakasikwa kutsiva kweWPC uye yechinyakare inorwisa kuora huni．